Bofa Lafaa Kaasanii Mataa Itti Marachuun Maraachuu Dha! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBofa Lafaa Kaasanii Mataa Itti Marachuun Maraachuu Dha!
Bofa Lafaa Kaasanii Mataa Itti Marachuun Maraachuu Dha!
Damee Boruu tii 11/26/2018
TPLF Generals behind Ogaden Liyuu Police.
Diina duraa kan taate TPLF haleeluuf qabsoon Bilisummaa Uummata Oromoo duraan dursee ulee diinaa kan taate OPDO of jalaa haxaa’uu akka qabu deddeebisee kaaseen jira. Midhaa OPDO waggaa 27 torba darbaanii Uummata Oromoo caalaa namni beeku hin jiru. Waan OPDOn uummata keenya gochaa turte uummata Oromoo nan barsiisa jechuu hin danda’u. Haala bifa kami keessa akka ture Uummatni Oromoo bareechee beeka.
Kan adda duraan dhiiga ilmaan Ormoo dhangalaasaa fi dhangalaasisa, qabeenya Uummata Oromoo samaa fi saamsisaa, mirga namumaa saba keenyaa dhiitaa fi dhiichisaa, mana hidhaa keessatti kumaatamaan obbolaa keenya akka daraman gochaa ture OPDO. Qabsoo hadhaa bara dheeraa uummatni keenya gochaa jiru kana keessa OPDOn bofa lafa jirtu ture. Har’a garuu Uummatni Oromoo dhiiga ilmaan isaa qaqqaalii itti dhangalaasee, lafee isaanii itti caccabsee bofa lafa jirtu irra deemuu dhiisee, lafaa kaasee mataa isaa itti marachaa jira.
Bofni mataa yaabate sammuu seenee galaafatu malee tole jedhee ni bu’a jechedhanii eegachuun abjuu dha. Qabsoon Bilisummaa Uummata Oromoo daandii bilisummaa irraa maqaa akka jiru namni hin hubanne yoo jiraate warra uummata Oromoo kijibaan gurguruuf gabaa bahan duwwaa dha. Kaayyoo fi akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo OPDO aangomisuu miti. Har’a Uummata keenya tasgabaa’aa, nagaan haa bu’uu jedhee kan xibaaru bitamtootaa fi ergamtoota OPDO akka tahan dagachuu hin qabnu. Uummatni keenya miliyoonaan kan lakkawwamu qe’ee isaa irraa buqa’ee marsaa Oromiyaa hundaa keessatti beelaa, dhukkubaa fi waraanan dhumaa jira. Nagaa eenyuuf buufna? Amma OPDOn aangoo dhuunfattu?
Erga qabsoo Uummata Oromoon ol baatee OPDOn ergamuu TPLF jalaa suuta suuta of baasaa ergamtoota lakkoobsa hin qabne horachaa jirti. Warra maqaaf Bilisummaa Uummata Oromoof qabsoofna jedhan hundaa of jala hiriirsaa akka jirtu ija keenyaan argaa jirra. Hojiin OPDO maqaa Oromoon daldaluu qofa. Bara kana immoo TPLFf ergamuun ishee hafee Impaayera Itoophiyaa kufaatii jalaa baraaruuf abbaa of gochuu yaalaa jirti. Abbaas kan tahuu dandeessu dhimmi Uummata Oromoo dabrsite gurgurachuun akka tahe wal nama hin gaafachiisu.
Uummatni Amhaaraa qawwee hidhatee hiriira nagaa baha. Mootummaan Naanoo Amhaaraa hidhachuun aadaa uummata keenyaati jedhee ifatti labsa. Qootee bulaan Tigraayi kaleesa qawwee akka qoraanii tareesee yaroo hiriira bahuu OPDOn keenya teesee ilaala jirti. GaruuOPDO fi kittilayyoo ishee bara kana horateef hojiin duraa WBO fi Uummata Oromoo hidhannaa hiikachiisuu dha. Gaaffiin Uummata Oromoo Inni Gubaa fi Duraa kan tahuu qabu hidhachuu akka tahe kanaan dura wanan kaaseef irra hin deebi’u.
Habashoota haaduu nuuf qarataa jiran utuu arginuu WBO fi Uummatni Oromoo hidhannaa qabnu abdan hiikachuun nu irraa hin eegamu. OPDOfs hin jilbeefannu. Qabsoo Bilisummaa Obbolaan keenyaa kumaatamaan itti aarsaa tahan akka galamaan gahuuf irree tokummaan Kabaa amma Kibaa, Bahaa amma Dhihaa harka wal qabbannee haa kaanu. WBOn, Qeerroo fi Qarreen Oromoo, Uummatni Oromoo bal’aan waanjoo garbummaa of irraa kaafnee abba biyyummaa keenya amma mirkaneefannu hiriira gallee wardiyaa haa dhaabbannu!
Mallattoon Mootii Gonfoo Mataa irra Kaawwachuu Dha? Damee Boruu: Caamsaa 24, 2020 Kononeel Abiyi gaafa…
ይህን ጉድ ያውቁት ነበር? ከአምባስደር ሱለይመን ደደፎ